पानी किन र कति पिउने ? | चितवन पोष्ट
गृह » पानी किन र कति पिउने ?
पानी जीवनको आधार हो । धर्मशास्त्र र दर्शनदेखि विज्ञानसम्मले जीवको उत्पत्ति पानीमै भएको तथ्यलाई स्वीकारेका छन् । जीवन जिउनका लागि पानी अत्यन्त मह¤वपूर्ण त¤व हो । हाम्रो शरीरमा पनि अन्य त¤वहरुभन्दा पानीकै बाहुल्यता छ । तर पनि पानीको मह¤वलाई बुझ्न नसक्दा हामीले विभिन्न समस्याहरु भोगिरहेका छौँ ।
हाम्रो शरीर रचनामा सर्वाधिक (६०–७० प्रतिशत) हिस्सा ओगटेको, विभिन्न जैव–रासायनिक क्रियाहरुमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा संलग्न रहेको हाइड्रोजन र अक्सिजनका परमाणुहरुले बनेको यौगिन नै पानी हो । हाडजस्तो कठोर अंगमा २२ प्रतिशत, दाँतमा २० प्रतिशत, छालामा ३० प्रतिशत, मस्तिष्कमा ७५ प्रतिशत, मांशपेशीमा ७६ प्रतिशत, रगतमा ८३ प्रतिशत र सम्पूर्ण शरीरमा लगभग ७० प्रतिशत पानीको मात्रा छ । पानीलाई जीवनको घोलक भन्ने उपनामले पनि चिनिन्छ । विभिन्न जैव–रासायनिक तथा उपापचयी क्रियाहरुलाई चाहिने जलीय माध्यम उपलब्ध गराउनेदेखि यस्ता क्रियाहरुमा आफैँ पनि संलग्न हुने, विभिन्न त¤वहरुको परिवहन गर्ने÷गराउने, रक्तचाप तथा शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने, विषाक्त पदार्थहरुको निष्कासनमा सहयोग पु¥याउने काम पनि पानीले नै गर्दछ ।
एउटा वयष्क पुरूषको शरीरमा ५५ देखि ७० प्रतिशत र महिलाको शरीरमा ४५ देखि ६० प्रतिशत पानी हुन्छ । शारीरिक पानीको दुइतिहाई हिस्सा कोषहरुभित्र हुन्छ भने एकतिहाई हिस्सा रगत र कोषहरुको वरिपरिको खाली ठाउँमा रहन्छ । शरीरमा पानीको सन्तुलन बनाइरहनका लागि लगभग दैनिक ३ देखी ५ लिटर पानीको आवश्यक पर्दछ । यसमध्ये ७०० मिलि पानी खानाको माध्यम भएर प्रवेश गर्दछ भने ३०० मिलि पानी शरीरभित्रै उत्पन्न हुने गर्दछ । बाँकी पानीको पूर्ति भने पानी पिएर नै गर्नुपर्दछ । यसैगरी, हरेक दिन ४५० मिलि पानी छालाबाट उडेर, ४०० मिलि पानी श्वाससँगै घुलेर, १५० मिलि पानी दिशासँगै मिसिएर र बाँकी पानी पिसाबको रुपमा बाहिर जान्छ ।
पानी पिउनुका फाइदाहरु :
१) शरीरमा बोसो लाग्न नदिएर तौल नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउँछ ।
२) उपापचयी क्रियापश्चात् जम्मा भएको युरिया, युरिक एसिड, क्रियाटिनिनजस्ता विषाक्त त¤वहरु, सोडियम, पोटासियम, क्यल्सियम, फसफोरसजस्ता इलेक्ट्रोलाइट (नुन)हरु र अन्य उत्पादनहरुलाई निष्कासन गरी रक्त शुद्धीकरणमा सहयोग पु¥याउँछ ।
३) छालाको सौन्दर्यलाई जीवन्त राख्दछ । मांशपेशी तथा स्नायुकोषहरुको कार्यक्षमतालाई सुचारू राख्न मद्दत गर्दछ । कोषहरुमा हुने अक्सिडेटिभ स्टे«स निवारण गर्न सहयोग गर्दछ ।
४) पाचन, अवशोषण र मल निष्कासनमा पानीको ठूलो भूमिका छ । पाचनपश्चात् आन्द्राहरुमा जम्मा भएका विशाक्त त¤वहरुलाई निकाल्नका लागि पनि पानीको आवश्यकता पर्दछ ।
५) तिर्खा लाग्नुभन्दाअगावै पानी पिउने बानीले टाउको दुख्ने, रक्तचाप घटबढ हुने, कमल पित्त, मृगौला तथा पित्तथैलीका पत्थरी, मोटोपन, जोर्नी दुख्ने, अपच, अनिद्रा एसिडिटी, ग्याष्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, अर्स, मधुमेह, चायाँ, पोतो, डन्डिफोर, महिनावारीको गडबडी, श्वेतप्रदर, हार्मोनहरुको गडबडी, क्लोरेस्टेरोल बढ्ने तथा घट्ने जस्ता रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यी रोग लागेकाहरुले यथेष्ट मात्रामा नियमित पानी पिउने गरे रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्दछ ।
कति पिउने पानी ?
१) पानीको मात्राको निर्धारण व्यक्तिको कार्यप्रकृति र मौसममा निर्भर गर्दछ । सामान्य काम गर्ने मान्छेले दैनिक ३ देखि ४ लिटर पिउन जरूरी छ । अतिरिक्त श्रम तथा व्यायाम गर्नेहरुले हरेक १०० क्यालोरीको दहनका लागि १०० मिलि अतिरिक्त पानी पिउन जरूरी छ ।
२) सामान्यतया पुरूषभन्दा महिलाहरुको शरीरमा ज्यादा बोसो हुने हुँदा महिलाहरुले ज्यादा पानी पिउन जरूरी छ । सन्तान उत्पादन गर्ने उमेर समूहका, गर्भिणी, बच्चालाई दूध चुसाइरहेकी महिलाहरुलाई झन् धेरै पानी पिउन आवश्यक छ ।
कसरी पिउने पानी ?
१) तिर्खा लाग्नु भनेको शरीरमा पानी अभाव भएको सूचना हुनु हो । त्यसैले, तिर्खा लाग्नुभन्दा पहिले नै पानी पिउने बानी बसालौँ । एकैपटक धेरै पानी पिउनु पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन ।
२) बिहान उठ्नेबित्तिकै लगभग १२०० मिलिजति पानी पिउनु स्वस्थकर छ । यसो गर्दा रातभरि सुत्दा हुन सक्ने डिहाइड्रेसन (निर्जलता) कम गर्न सहयोग गर्दछ ।
३) ठोस भोजन गर्नुभन्दा १ घन्टा पहिले र गरेपछि २ घन्टापछिसम्म पानी पिउन हुँदैन । भोजन निल्न कठिन भएमा १० मिलिजति पानी लिन सकिन्छ, तर भोजन लिइसकेपछि पानी लिएमा पाचन रसहरुको पाचन शक्ति कम हुन जाने हुँदा भोजन पचाउन कठिन हुन्छ । फलतः विभिन्न प्रकारका पेटका रोगहरु लाग्न सक्छन् ।
४) राति सुत्नुभन्दा अगाडि पनि प्रशस्त पानी पिएर सुत्ने गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा सुतेको समयमा शरीर निर्जलताको शिकार हुँदैन ।
५) यसका अलावा, दैनिक १–१ घन्टाको अन्तरालमा १ देखि २ गिलास पानी पिइरहनु पर्दछ ।
६) खेल्दा, कुद्दा र परिश्रम गर्नुभन्दा आधा घन्टा पहिले प्रशस्त पानी पिउनु राम्रो हो । तर, परिश्रम गरिरहेको समयमा वा श्रमपश्चात् लगत्तै पानी पिउँदा शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट (नुन)हरुको सन्तुलन बिग्रिन गई आपतकालीन स्थिति पनि आउन सक्छ । साथै, श्रमको समयमा पानी पिउँदा विश्राम गरिरहेको पाचन प्रणालीलाई अतिरिक्त दबाब पर्न जान्छ ।
७) तिर्खा लागेको बेलामा पानी नै पिउने गरौँ, कोल्डड्रिङ्गस तथा अन्य पेय होइन ।
८) पिसाबलाई पहेँलो हुन नदिऊँ, स्वस्थ मान्छेमा पहेँलो पिसाब आउनु भनेको निर्जलताको लक्षण हो ।
(लेखक भरतपुर—१ वागीश्वरीस्थित योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयका मेडिकल डाइरेक्टर हुन् ।)
क्रान्ति, देवघाट र विद्रोह
– टिपी पौडेल poudeltipi@gmail.com ऊ देवघाट पुग्छ । बच्चैदेखि सुनेको थियो कि...
शिक्षामा व्याप्त सिन्डिकेट पनि तोडिएला त ?
डा. धनपति कोइराला dpk2068@gmail.com यातायातमा व्याप्त सिन्डिकेट करिब अवसानको...
विषादीसम्बन्धी चितवनका कृषकहरुमा रहेको ज्ञान, धारणा र अभ्यास
– मनोज पौडेल mjpaudel@gmail.com वर्तमान अवस्थामा कृषिक्षेत्रमा भैरहेको विषादीको...
व्यक्ति उखान समष्टि अर्थमा चरितार्थ हुनु दुःखद
‘नारायणी टुडे’को सत्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा थाइल्यान्ड भ्रमण